Ithimba lebhizinisi eliholwa yimenenja Jikelele uColin ukukhombisa isimilo esihle seCanton Fair!
Sibhekisa kumaCanon Fairs amabili minyaka yonke futhi asikaze singabikho. Okulandelayo isithombe seqembu lethu lebhizinisi elisebenzayo namakhasimende kulo mbukiso:
I-ALLWIN isebenza namakhasimende ngezikhathi ezinzima ze-COVID-19
Ekuqaleni kuka-2020, sabhekana nobhadane olukhethekile-i-COVID-19. Amafekthri amaningi bekumele ayeke ukukhiqiza cishe izinyanga ezimbili. Ngemuva kwezikhathi ezinzima, siqale kabusha ukukhiqizwa okujwayelekile. Kodwa-ke, leli gciwane liye laba likhulu ngokwengeziwe emhlabeni wonke. Elinye lamakhasimende ethu ...
U-ALLWIN –umhlinzeki wokubhala odumile
Ikhasimende eBrazil li-ode umkhiqizo wokubhala wesitsha esingu-1 × 20-intshi ezinyangeni ezimbili ezedlule. Ekupheleni kukaJulayi 2019, yena nomkakhe beza endlini yethu yokugcina bezobhekwa. Ngemuva kokuhlolwa, weneliseka kakhulu ngemikhiqizo yethu ye-ALLWIN. Sijabule kakhulu ngalokhu futhi sikholwa ukuthi lokhu kuzoba ...
I-PVC Mat idlule ngempumelelo i-2.0 RoHS yokuhlolwa okuyi-nonmetallic
Ukuhlaziywa kwenkambiso yentuthuko yesikhathi esizayo yomkhakha wokubhala waseChina
1. Ukubuka konke ngokuthuthukiswa kwemboni yokubhala I-Stationery iyizinhlobonhlobo zamathuluzi abantu abawasebenzisayo emisebenzini yamasiko njengokufunda, ihhovisi nempilo yasekhaya. Ngokuthuthuka okuqhubekayo komnotho nobuchwepheshe, isigaba sezinto zokubhala sibuye sibuyekezwe njalo futhi sithuthukiswe. Isimanje st ...
Ungawukhetha kanjani umata omuhle wokusika ngokuqonda ukusetshenziswa nezici zokusika umata?
1. Inhloso nezimpawu zomata wokusika? Iphedi lokusika lingenye yamathuluzi abadlali bemodeli bamaphepha okufanele bawahlomise. Umata wokusika ungenye yamathuluzi abadlali bemodeli bamaphepha okufanele bawahlomise: a. Umata wokusika uzovikela i-blade futhi unwebe impilo yenkonzo yensimbi; b. I-cutti ...
Ekunyusweni kwesiteshi nokwakhiwa komkhiqizo wemboni yokubhala eChina
Ubudlelwano phakathi komkhiqizi nomthengisi buhlala ebudlelwaneni bokuthengiselana obulula, futhi la maqembu womabili awanakho ukubambisana nokusebenzisana kwezinga eliphezulu nezinga eliphezulu. Ngenxa yalokhu, izinsizakusebenza zamaqembu womabili azixhunyiwe futhi inhloso yomkhiqizo ojwayelekile emakethe ayikwazi ...
I-128th Canton Fair 10.15 ~ 10.24 Siyakwamukela ukuvakashela idokodo lethu: 1.2M15-16 kulayini
Makhasimende othandekayo, ngenxa yomthelela wobhadane lomqhele omusha we-pneumonia emhlabeni kulo nyaka, i-Canton Fair yalo nyaka ibibanjelwe kusuka kokungaxhunyiwe ku-inthanethi kuya ku-inthanethi. I-128th Canton Fair isiqalile, futhi isikhathi sokubamba sisuka ngo-Okthoba 15 kuya ku-Okthoba 24. Manje umenywa ikakhulukazi ukuthi ubuke o ...